Abavelisi kunye nabaxhasi beFlash yeDiskhi ye-USB - iTshayina yeFlash drive yeChina
1. Magnetic 10000mah PD22.5W Qi15W Amanqaku okuthengisa ngokukhawuleza eBhanki yamandla: ① I-4 ye-LED ibonisa imeko yebhetri, nganye nganye ine-25% yomthamo. Les Iifowuni ze-15W ...
15W Magsafe 3 ngo-1 Wireless ...
1. I-15W iMagsafe 3 kwi-1 yokuThengisa amaFowuni okuThengisa ngokukhawuleza: ① Eyakhelwe ngaphakathi kwi-magnetic egcwalisiweyo ene-auto adsorption yezixhobo. In 3 kwi ...
Dual 10W Bamboo & iinkuni ...
1. Dual 10W Bamboo & Wooden Quick Wireless Charger Points Points: ① Eco-friendly wireless charging pad according to green initiative ....
Ukufunxa iNdebe ye-15W ekhawulezayo ...
1.Ukufunxa iNdebe ye-15W ngokukhawuleza kweshaja engenazingcingo yokuThengisa: ② ILogo Brand ...
Ikhadi letyala elakhelweyo ...
1.Ikhadi leKhadi letyala elakhelweyo kwi-10W Izipho ezikhawulezayo zokuthengisa itshaja engenantambo: ① Ikhadi lokuthenga ngetyala elicekeceke kakhulu elingu-10W kwifowuni ...
Ikhadi leWood Bamboo yeKhadi leDiskhi yeDiskhi
Inombolo yomba: MQ-921U
Amandla: 64MB ~ 128GB
I-bamboo kunye ne-Wood eco-friendly USB drive kuzo naziphi na izixhobo ezinonxibelelwano lwe-USB.
Uyilo olwahlukeneyo kunye nezinto ezisetyenziswayo kunye nelogo yesiko ukukhuthaza ishishini lakho.
I-Bamboo Wood Swivel Eco eyi-USB Flash Drive
Inombolo yomba: MQ-920U
Uyilo olwahlukeneyo kunye nezinto ezinophawu lwentengiso lwentengiso.
I-Rubber ye-PVC yesiqhelo ye-USB Memory Stick
Inombolo Umba: MQ-919U
Indlela efanelekileyo yokufezekisa izimvo zakho okoko ufuna, xelela nje okanye usinike ifoto enye, siya kwenza ubugcisa be-3D kwiiyure ezingama-48.
Isiko lasimahla eliyilwe nge-PVC ye-USB yokunyusa ilebheli yabucala. Imibala, iimilo, ubungakanani zonke zichazwe ngumthengi ngaphambi kwemveliso emininzi.
Isiko seCartoon Cartoon Ship i-USB Flash Drive
Inombolo Umba: MQ-918U
Ukhetho olwahlukeneyo okoko ufuna, abantu abaninzi bakhetha ukwenza izithuthi, iinqanawa, iinqwelomoya, izilwanyana kunye nezinto eziqhelekileyo zemihla ngemihla ezinjengeebhalbhu zokukhanya, izihlangu kunye nokutya.
4 kwi-1 iMicrosoft USB Lightning Type C OTG USB Flash Drayivu
Inombolo yomba: MQ-917U
I-OTG 4 in-1 memory stick nge-USB encinci yohlobo C kunye neadaptha yombane, ulayishe iifayile kwi-USB flash drive kwaye uyenze ingacinywa, inokutshintsha i-icon kunye nelebheli.
Ukuqhuba ngokuzenzekelayo: iJPG, mp3, ividiyo, iwebhusayithi njl.njl xa ufaka i-USB drive kwikhompyuter okanye ezinye izixhobo, inkxaso ye-encryption ukukhusela idatha yakho, ipassword inokulungiswa ngumsebenzisi.
Uhlobo lweClip ye-LED ILogo USB3.0 Memory Stick
Inombolo yomba: MQ-511U
Uhlobo lweklip enemibala emibala ekhanyayo yokuyila ilogo kukonyuselwa kweshishini labucala.
Akukho sidingo sokufaka nayiphi na isoftware, faka nje i-USB flash drive kwizixhobo ezinesimo esibonakalayo se-USB.
I-OTG 3 ku-1 Umbane wohlobo C ojikelezayo kwi-USB Flash Drive
Inombolo yomba: MQ-916U
I-USB OTG (On-The-Go) iyahambelana nazo zonke ii-smartphones kunye neetafile ezinomsebenzi we-OTG, akukho mfuneko yokufaka nayiphi na isoftware, ukuhambisa ngokulula idatha phakathi kwee-smartphones ze-OTG, iipilisi kunye neekhompyuter, ukuhambisa ukusebenza kuxhomekeke kwisixhobo somamkeli.
Inkqubo yokusebenza yenkxaso ye-Android, Windows, Mac OS, IOS kunye neLinux.
I-Swivel LED ekhupha i-logo ye-UDP yeMemori
Inombolo yomba: MQ-603U
Umthamo opheleleyo we-UDP ojikelezayo we-thumb drive ye-LED ekhupha i-logo yoyilo lwentengiso yabucala yesiko.
Akukho sidingo sokufaka nayiphi na isoftware, faka nje i-USB flash drive kwizixhobo ezinonxibelelwano lwe-USB ukudlulisa, ukugcina kunye nokugcina idatha.
I-LED ekhupha iLogo ngeDiskhi ye-USB ngeSilicone Lanyard
Inombolo yomba: MQ-516U
Isitayile esine-silicone yenkomo ye-thumb eqhuba nge-LED ekhupha uphawu loyilo lweshishini labucala elikhuthazayo.
Akukho sidingo sokufaka nayiphi na isoftware, vele uyifake nje kwiLaptop yakho okanye kwidesktop ukufikelela okanye ukugcina idatha.
UkuKhanya okuKhanya ngokuPhezulu kwiMemori yeNdawo
Inombolo Umba: MQ-514U
Ukukhanya kwesitayile kuyilo lwe-logo enemibala ye-LED yokunyusa ileyibheli yabucala, ubungakanani obufanayo kunye nesitshixo.
Xhuma kwaye udlale, iyahambelana ne-USB 3.0 USB2.0, inkxaso Win98 / ME / 2000 / XP / Vista / win7 / win8 / win10 Mac OS 9.X / Linux2.4 okanye ngaphezulu.
UkuKhanya ngeLinen yeSlim Metal USB Drayivu ngeBuckle
Inombolo Umba: MQ-515U
Isitayile esincinci setyhidi eyahlukeneyo imibala ye-LED ekhupha uphawu loyilo lweshishini labucala elikhuthazayo.
UkuKhanya phezulu ILogo Slim Metal USB Flash Drive
Inombolo Umba: MQ-513U
Ukukhanya kwesitayile kuyilo lwe-logo enemibala ye-LED yonyuselo lwelebheli yabucala.
Intlawulo ekhawulezileyo enentambo isiya kwikhulu le-watt, ukungqinelana komgaqo-nkqubo kuyandiswa ...